Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland oo shir uga furmaya Istanbul – Radio Muqdisho
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland oo shir uga furmaya Istanbul
Waxaa maanta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga lagu wadaa in uu ka furmo wadahadalada u dhexeysa Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland, kaasi oo looga hadli doono arrimo badan oo ku saabsan midnimada Soomaaliya.
Safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in wafuud ka kala socotay Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa Maamulka Somaliland ay iminka ku suganyihiin dalka Turkiga, isla markaana shirka uu socon doono 3-4 cisho, lana filayo in la soo gabo gabeeyo 4-ta bishan.
Safiirka ayaa tilmaamay in wadahadaladii hore la sii ambo qaadi doono, isla markaana la isla meel dhigi doono arrimo badan, isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay inay shirka ka soo bixi doonaan.
Gabo gabada shirka ayaa la filaa in laga soo saaro Warmurtiyeed ku saabsan go’aanada shirka ka soo baxa.
21-ka bishii December ee sanadkii tegay ee 2014 ayay ahayd markii Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha Maamulka Somaliland Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo ay shir ku yeesheen dalka Jabuuti, kaasi oo ay isla meel dhigeen arrimo badan oo ku saabsan sidii loo wadi lahaa wadahadala labada dhinac u dhexeysa.
Qaar ka mid ah dhaawacyadii Hotel Central oo caafimaad dibadda ah loo qaaday